अस्ति मात्रै ईन्चार्ज पद खोसेका ओलीले भीम रावलमाथि आज फेरि गरे ठूलो घात, अब के होला यसको परिणाम ? – GALAXY
अस्ति मात्रै ईन्चार्ज पद खोसेका ओलीले भीम रावलमाथि आज फेरि गरे ठूलो घात, अब के होला यसको परिणाम ?
केही दिन अघि मात्रै भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ईन्चार्जबाट हटाएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावलमाथि अर्को ठूलो घात गरेका छन् । उनले पदको बार्गेनिङ गर्नेहरुलाई एमालेमा ठाउँ नहुने भन्दैं रावलको चित्त दुखाएका हुन् ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसिए पार्टीमा नबस्ने घुर्की लगाएपछि बार्गेनिङ गर्नेहरुलाई एमालेमा ठाउँ नभएको बताएका हुन् । १० बुँदे कार्यान्वयन नभए रावलले एमाले छोड्नेसम्मको तयारीका साथ आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको भनिएका बेला ओलीले रावलको नाम नलिइकनै पदका लागि पार्टी छोड्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने बताए ।
भीम रावललाई इंकित गर्दै उनले भने, ‘एमालेका केही नेताले पद नपाए पार्टी छोड्छु भनेर बार्गेनिङ्ग गरेको देख्छु । त्यस्तो बार्गेनिङ मलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी लिने कुरा स्वभाविक भए पनि पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति एमालेको नेता हुन नसक्ने भन्दै उनले अब पार्टीमा त्यस्तो विचारले स्थान नपाउने चेतावनी पनि दिए ।
‘पद नपाए पार्टी छोड्ने रे । के भन्छ कार्यकर्ताले ? फलानो पद नदिने हो भने म पार्टीमा बस्दिन, छोड्छु रे के भन्या त्यो ?एमालेका लागि सुहाउने कुरा हो ?,’ ओलीले भने, ‘कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आदर्शले के भन्छ ? पदका लागि काम गर, पद नपाए पार्टी छोड भन्छ ?’ ओलीको प्रश्न छ । देश,जनता र आन्दोलनको रक्षाका लागि जिम्मेवारी आइपर्दा पदमा बस्नुपर्ने तर पद नपाए पार्टी छोड्छु भन्नु आन्दोलन विरोधी कुरा हुने उनको भनाइ छ ।
‘म कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु सबैको क्रमशः पालो आउँछ तर पदका लागि मरिमेट्नु हुँदैन । पदको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यो देश,जनता,आन्दोलन र पार्टीका लागि हुनुपर्छ । पद के का लागि भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । ओलीले पद नपाए पार्टी छोड्ने कुरा एमालेको नभई माधव नेपालको बाटो भएकाले त्यस्तो बाटोमा नलाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आग्रह पनि गरे ।